Indlu encinci ngasemfuleni | Imizuzu engama-20 ukusuka ePrague
Uyilo olulodwa lwendlu encinci enamavili kumwonyo womlambo.
Siyilwe ukudala indawo eyaneleyo yemizuzu kunye, ukuthandana kwabantu ababini, kunye nokuphumla ngasemlanjeni. Ivumba lenkuni, okanye isitovu somlilo sizabalazela ukwaneliseka kunye nokubandakanyeka kwazo zonke izivamvo. Iifestile zesiFrentshi zikuvumela ukuba ubukele ngokuthe ngqo ebhedini umlambo uhamba ngelixa uphunga isiselo osithandayo.
Kufuphi kukho indlela yebhayisekile, indawo yogcino lwendalo, ihamba nemibono yeVltava canyon, okanye eyona cawa indala kumazwe aseCzech.
Indawo yokuhlala ibandakanya ikofu, iti, ioli, iziqholo, i-muesli, ubisi kunye ne-oatmeal.
Ukusuka ePrague's Stromovka unokusifumana ngebhayisekile ecaleni kwendlela yebhayisekile ecaleni komlambo ngokuhamba ngokukhululeka kwimizuzu engama-40. Uhambo oluya kuthi sele lungamava. Indlu encinci yindawo efanelekileyo yokuhamba ngebhayisikile.
Sihlala kwisixeko kwaye inkuthazo yokuzaliseka kwendlu encinci yayingumnqweno wendlela yokuphila ezimeleyo, ukwakha ngokoqobo into kwaye usondele kwindalo. Sasebenza kwikhabhinethi ehambayo ukusuka kumbono wokuqala ukuya ekuphunyezweni okuyinyani ixesha elingaphezu konyaka.
Sikholelwa ukuba asodwa, abathi ngamanye amaxesha bathande ukuphuma ngaphandle kwesixeko kwaye bafumane iindawo ezifihliweyo ezihlala zinika iinkumbulo ezimnandi ezingalindelekanga. Ke ngoko, siye sayila saza sakha iprototype yekhaya elihambayo, elivumela abanye abantu abanengqondo efanayo ukuba bazazi iindawo ezinjalo.
Siyathanda ukuchitha ixesha kumoya omtsha kwindalo, yiyo loo nto umcimbi wozinzo ubalulekile nakuthi. Iqokobhe elingaphandle likhuselwe yindlela yaseJapan yokwenza ulusu ngaphandle kokusebenzisa ipeyinti yemichiza. Kubalulekile kuthi ukuba indlu yethu encinci inempembelelo encinci kwimeko engqongileyo.
Amandla elanga ayenza ikwazi ukuzimela kwaye, ngenxa yokuhamba kwayo, ayishiyi mkhondo kumhlaba apho ikhoyo. Umzekelo, izibane, ifriji okanye iimpompo zamanzi zisebenza ngokwazo. Oku kusibangela umdla ngalo lonke ixesha siqalisa iimpompo zamanzi, ngalo lonke ixesha sikhupha iziselo ezibandayo efrijini okanye xa sinokufunda incwadi ngokuhlwa. Siyifumana ilungile.
Siyakuvuyela ukwabelana nawe ngamava anjalo. Sikunqwenelela ukuhlala okumnandi, u-Ivana noJan
Indawo engqongileyo inika umtsalane wendalo, indlela yebhayisekile esuka ePrague idlula eStromovka, iziphungo ezidumileyo zalapha, okanye izikhumbuzo ezibalulekileyo zembali.
Imisebenzi ejikeleze iHusinec okanye ejikeleze indawo apho iphela khona indlela:
-Vetrusice gorge National Nature Reserve (Drabovna Cave)
- ukuhamba ngeziqhamo zeapile ukuya kwilali yaseVetrusice, apho unokubukela ukutshona kwelanga
-i-trout entsha etshayayo, iisoseji zasekhaya, ibhiya kunye nezinye izinto ezityiwayo e-U Hastrmana
-Ithenisi kunye nepétanque kwilali ekufutshane yaseRez
- uzolile uhamba ngasemlanjeni
- tyelela eyona cawa indala kumazwe aseCzech kwelinye ibhanki yeVltava eLevy Hradec
- umjikelo wendlela eya kwiZoo yasePrague (i-9 km ecaleni komlambo / imizuzu engama-35 kwicala elinye)
- umjikelo wendlela eya kwi-baroque chateau, i-chateau park kunye ne-fallow deer kwidolophu yaseVeltrusy (i-17 km ecaleni komlambo / iyure yokuqhuba kwicala elinye)
-Ichibi leKonetopy (indawo efanelekileyo yokuqubha ngexesha lasehlotyeni)
Siyakukhathalela ukuba uphumle kwaye uhlala ukhethekileyo. Kuyo nayiphi na imibuzo siyafumaneka kwifowuni ephathwayo kunye ne-imeyile. Sihlala ePrague, kodwa sizabalazela ukwamkela ubuqu ukuze sicebise kwaye sicebise yonke into. Ngaphambi kokuhlala kwakho, sazise malunga nezinto ozikhethayo, into ongathanda ukuyifumana kwaye ubone kwindawo, siya kukuvuyela ukukunceda.
Siyakukhathalela ukuba uphumle kwaye uhlala ukhethekileyo. Kuyo nayiphi na imibuzo siyafumaneka kwifowuni ephathwayo kunye ne-imeyile. Sihlala ePrague, kodwa sizabalazela ukwamkela…